Ama-Archives Wokuvakasha Kwezitimela | ikhasi 2 ka 14 | Londoloza Isitimela
Noma ngubani lapha ovela ngaphandle kwaseYurophu? Phakamisa isandla sakho uma njengoba bekhungathekile ngenxa zokuthutha umphakathi njengoba nje nami ngingumlingisi. Impela, INew York inezitimela zangaphansi, futhi iToronto isebenza metro, kodwa ngobukhulu, umhlaba uyachuma ezimotweni. Ngakho-ke noma nini lapho sizithola senza…
Kukholelwa kahle ukuthi ukuhamba yinto eyodwa oyithengayo ukuze ube yisicebi noma uzizwe ucebe! Futhi akudingekile njalo ukuthi uhlukane nemali oyithole kanzima ukuze ujabulele ingcebo. Ngenkathi uhlela ukuphuma endaweni eshisayo yelanga eshisa ilanga…
Ukukhulelwa kungenye yezikhathi ezinhle kakhulu empilweni yakho. Kuyenzeka, Nokho, woza nemikhawulo ethile. Ikakhulu uma uhlela ukuhamba ngenkathi ukhulelwe. Ukuthwala nokwakha umntwana kukhawulela uhlobo lokuhamba ongalusebenzisa ukuzungeza, ikakhulukazi uma…
Covid-19. Yikho konke esingathi sikwazi ukukhuluma ngakho, futhi ngesizathu esihle. Lokhu igciwane uye balawulwa emhlabeni futhi washintsha ngokuphelele indlela esicabanga ngayo ekuphileni kwansuku zonke futhi yebo zemininingwane Izikhangibavakashi. Ukuhamba ngezitimela kuyindlela yokuhamba eminingi…
Kepha lapho ehamba kulo iviyo bekolishi, kulungile ngokuphelele ngeke ibe uhambo futhi nje izinto ngesikhathi osithandayo. Touring endaweni kungekho okulindele noma iyiphi ukuhlela ngaphambi empeleni indlela engcono kakhulu ukuthola ingcebo efihliweyo. It leaves enough room for…
Europe iwukuba uxhaxha umlando namasiko kanye izakhiwo obumangalisayo ikhaya, eziningi zazo ishuthiwe ngokusebenzisa iqoqo nezwekazi elikhulu kwezindawo zokukhulekela. Yingakho namuhla, sike babanjwa 3 ukuthi sicabangela ekubeni ngokuphelele uyisidingo ubona, ukumboza izakhiwo ezidume umhlaba wonke kwezinye…
Hamba on an adventure ukuze bakitaza ukunambitheka yakho nemiqumbe futhi iqhaza okungcono ukudla izinkambo eYurophu. Uma ngabe Foodie okhuthele, nolwanga lwakho, kanye Instagram yakho okuphakelayo ngeke sifinyelele ngokujabula nalokho nawe uzozibonela. Kunjalo, indlela enhle kakhulu…
Solo travel at zizinhle kuba olungonakalisiwe Ukuzitika kanye spontaneity. Kuyinto umuntu abe nenkululeko yokuphinde ziyafika zidlule njengoba sicela, ukuhlala endaweni eyodwa isikhathi eside emzweni odlulayo futhi weqa amasayithi inzuzo; uma ayikwazanga ukhathazwa. I onakalisa kuphela udinga ukwenza…